Volom-borona malaza: sary sy anarana (zaridaina, trano anatiny) - Famokarana voankazo - 2019
Zavamaniry sy voninkazo eny an-tampon-trano
Ny zavamaniry bulbous no solontenan'ny malaza amin'ny voninkazo. Sarobidy noho ny fahatsorany, ny loko mamirapiratra, ny fiaretana any amin'ny klima mangatsiaka, ary koa ny fahafahana mamorona zaridaina tsy manam-paharoa ahitana karazana karazana samihafa. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ireo karazam-pitaovana nalaza indrindra, jereo ny sarin'izy ireo amin'ny anarana sy ny filazalazana, ary hianarany ny fomba tokony hampitombo azy ireo.
Lisitry ny zavamaniry malaza amin'ny sary
Fitsipika momba ny famoronana fotom-pandam-biriky tsy hita isa
Ny endriky ny fambolena ambolena
Ny voninkazo dia natao mba hambolena avy hatrany rehefa mividy entana. Mazava ho azy, afaka mamela azy ireo mandritra ny fotoana fohy ianao, hitazona azy ireo any amin'ny toerana mangatsiatsiaka, maina, fa tsara kokoa ny manamboatra tongolo mandrapahatonga azy ireo hitombo ary ho malefaka.
Ny honohazo toy ny crocuses, daffodils, ranomandry, ririnina eny amin'ny toerana malalaka. Ny Gladiolus sy ny Crocosmia dia heverina ho zavamaniry tsy dia misy fandeferana ary tokony hodiovina amin'ny ririnina amin'ny zaridaina. Ny biriky amin'ireo voninkazo ireo dia mihodina amin'ny fararano amin'ny fararano ary voatahiry ao amin'ny toerana mangatsiaka mangatsiaka hatramin'ny lohataona. Mety ho ririnina ny ririnina eny an-dalambe, raha toa izy ireo no mitazona ny ririnina. Ho an'ny fialofana dia azonao ampiasaina ny mololo, tavy, ravin-kazo, ravina tapaka, ravina lavo. Ny hatevin'ny rakotra mandrakotra dia tokony 8 cm.
Ny fitaovana fialofana dia tsy maintsy mahandro. Esory ny voninkazo rehefa ny voaloboka voalohany. Ny Mulching dia ahafahanao miaro ny tany tsy vitan'ny mangatsiaka, fa koa avy amin'ny fikajiana vorona tsy mihetsika aloha loatra mandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina. Esory ny tranon-jaza rehefa mandalo ny fandrahonana ny hatsiaka farany.
Fantatrao ve? Hatramin'ny andro fahiny, ny lisy dia nitombo ho sakafo, zavamaniry ary zavamaniry. Noraisin'izy ireo ny fahaiza-manao angano mba hamadika ny metaly ho volamena. Ireo lily fotsy koa dia matetika ampiasaina amin'ny fombafomba sy fampakaram-bady ho mariky ny famindram-po sy ny fahadiovana.
Ho an'ny tanimbary rehetra dia tokony ho tsara drafitra. Raha mavesatra ny tany, dia azo asiana alikaola na fasika izany. Raha mitombo ao an-trano ireo voninkazo ireo, dia ilaina ihany koa ny fandosirana drafitra. Tsy maintsy misy lavaka draina any anaty vilany na vilany.
Ny ambim-bava dia nambolena tao anaty lavaka mitovitovy isaky ny avo roa heny. Fa ny halalin'ny lavaka dia miankina amin'ny zavamaniry nambolena. Ankoatra izany, rehefa mitsidika ianao dia mila mihaino tsara ny tany. Raha fasika ny tany, dia maniry kely kokoa ny biriky, ary raha mavesatra ny tany, dia kely kokoa izany. Ny biriky voninkazo toy ny tulips, hyacinths, daffodils dia lehibe, ary tokony hambolena azy ireo amin'ny halaliny avo roa heny ny biriky. Zana-borona kely no nambolena teo amin'ny tendrony. Izy io dia napetraka eo amin'ny farany ambany amin'ny lavaka ary mihintsana kely mankany amin'ny tany. Ny tongolo dia tokony hiantsoroka ambony. Aorian'izay, fenoy ny lavaka miaraka amin'ny tany ary miompana kely. Ny toerana famafazana voninkazo dia mila marika.
Raha tsy mahavokatra ny tany, dia asaina manondrana zezika mangatsiatsiaka. Io sakafo io dia sakafo amin'ny taolana. Raha nambolena nandritra ny vanim-potoana iray ilay zavamaniry, ary avy eo dia nariana ilay jiro, dia tsy azo ampiasaina izany.
Saingy raha milatsaka ny ririnina ary mijanona amin'ny herintaona, dia mila zezika ny zavamaniry. Rehefa mamboly vilany na fitoeran-jiro dia mila akanjo lava kokoa ny zavamaniry, satria vetivety dia simba ny tahirin-tsakafo. Miaraka amin'ny fambolena toy izany, dia tsara kokoa ny manala voninkazo miaraka amin'ny akanjo mofomamy na zezika lava be.
Ny voninkazo mivelatra eo amin'ny lohataona dia tokony hadiana moramora alohan'ny hanombohan'ny voninkazo dia manomboka, ary avy eo dia manondrahana mandra-piverenan'ny ravina mavo sy mavo. Ny zavamaniry izay miposaka amin'ny fahavaratra dia tokony ho rano be dia be mandritra ny vanim-potoana maina mba hahatongavan'ny rano eo amin'ny fakany izay lalina. Ireo loko ireo dia ahitana gladeoli sy narary. Raha miala sasatra ny biriky dia tsy afaka mamaivay ny tany - tena mampidi-doza ho azy ireny, fa raha mitahiry ny ravina ny zavamaniry, dia tokony ho rano izy.
Zava-dehibe izany! Tsy azo atao ny manondraka ireo zavamaniry amin'ny lozam-pifamoivoizana avo be miaraka amin'ny fiaramanidina mahery, toy ny ahafahanao manongotra na manapaka ny voninkazo.
Ny zavamaniry izay mitombo ao an-trano (tavoahangy, fitoeran-drivotra, fitahirizana) dia mila rano rehefa tondrahana ny tany. Mamoaka ny tany, tsy matevina loatra.
Ny voninkazo izay misy tsiranoka marefo na tsangam-bato marefo, ary koa ireo izay mitombo amin'ny toerana nipoaka, mila fanohanana.
Aza hadinoina ny mikarakara tsara ny zavamaniry rehefa avy mamony. Izany fikarakarana izany dia miankina amin'ny voninkazo amin'ny vanim-potoana manaraka.
Raha te-hikolokolo ny sainao ianao amin'ny zavatra mahaliana kokoa noho ny fandriana voninkazo mahazatra, mamorona mpikirakira, alpine slide, rock arias. Ao anatin'ireo kompile sarotra ireo dia ampiasaina ny zavamaniry, vato ary ny endriky ny haingon-trano - amin'ny endriny, ny fahafaha-mamorona dia tena lafo.
esory amin'ny voninkazo, ny antsy na ny sandry;
Esory ihany ny voninkazo, tokony hijanona ny fotony.
Tsy afaka manala ny ravina mandritra ny fanesorana ny hazo fihinam-boa, satria mamorona sakafo ho an'ny biriky.
Ny zana-trondro voalohany sy be dia be no tena voalohany ao amin'ny zaridinao amin'ny lohataona. Any amin'ny faritra mangatsiaka, mbola tsy tafavoaka ny oram-panala, ary efa nanangona ny felana izy ireo, efa manomboka ny masoandro. Raha toa ka manoratra amim-pahombiazana ny loharano lozisialy amin'ny famolavolan'ny voninkazo, dia hampifaly ny masonao isan-taona izy ireo.
Fantatrao ve? Ny katolika any Espana sy i Italia dia mihevitra fa ny voninkazo dia ny voninkazo ho an'ny Virjiny Masina, ary ny endriky ny Renin'Andriamanitra dia matetika mamolavola amin'ny felam-boninkazo amin'ireny voninkazo ireny.
Diniho ny lisitry ny voninkazo malaza amin'ny vonomoka:
snowdrop. Ity voninkazo ity dia iray amin'ny voalohany ary ara-bakiteny avy eny ambanin'ny lanezy. Ny Snowdrop dia afaka mahatohitra hafanana -10 ° C.
Babiana - voninkazo iray avy amin'ny fianakaviana Corridor. Ny ravina maingoka, lanceolate, ravina sabatra 15 santimetatra, izay mihetsiketsika mampihetsi-po, dia mitombo avy amin'ny loko.
Colchicum - Antsoina koa hoe colchium, dia zavamaniry maharitra. Amin'ny karazana voninkazo dia misy karazany 70.
Gabrantus (lily orana) - misy aviavin'ny rivotra izay manamarina ny anaran'ilay voninkazo, izay midika hoe "voninkazo malemy" amin'ny teny grika.
Gladiolus - Ny voninkazo tsy hita isa, izay misy karazan-tsakafo maherin'ny 5000. Misy gliosida sy hybride ary wild. Mankalaza ny hatsarana sy ny karazana loko izy ireo.
Lily atsinanana - Ireo voninkazo ireo dia sarobidy voninkazo lehibe (mihoatra ny 20 santimetatra eo ho eo) ary loko samihafa.
Lily LA hybrid - azo avy amin'ny fambolena lisy Aziatika sy voninkazo lavalava. Io voninkazo io dia miavaka amin'ny fiaretany sy ny endriny ary ny tsy fisehony.
Lily OT-hybrid - Ny zavamaniry dia azo avy amin'ny fiampitana lobolamena sy oriental. Any amin'ny avo, dia mahatratra 1-1,5 m na avo kokoa izy ireo, amin'ny fepetra tsara.
Narcissus - dia voninkazo malaza indrindra amin'ny antitra. Maro ny karazana aretin-tsaina, ary tena ankasitrahan'ny mpamboly noho ny hakantony mahafinaritra izy ireo.
tulip - Azia afovoany dia toerana nahaterahan'io zavamaniry io, na dia misy sombin-kazo mahomby indrindra any Holandy aza. Tao anatin'izay taona vitsivitsy izay, maherin'ny 3.500 karazana tulips amin'ny endrika sy loko isan-karazany no nentina.
Ireto manaraka ireto dia voatanisa zavamaniry any anaty ala (miaraka amin'ny sary sy ny anaranao) azonao ampiasaina hanamboarana ny tranonao:
Freesia hybrid - zavamaniry tena mahafinaritra manana voninkazo vita amin'ny tavoahangy eo amin'ny andaniny iray misy tongolobe mahery hatramin'ny 50 santimetatra ambony. Manana fofona matsiro sy mamy izy io.
Himenokallis mahafinaritra - Mamboly voninkazo mamy izy amin'ny faran'ny lohataona, manomboka eo amin'ny 60 santimetatra ny felam-boninkazo. Mitovitovy amin'ny karazana ravina misy ravina ety sy lava izy io.
Hippeastrum Hybrid - misy tavy hozatra, izay misy voninkazo 3-5 ny voninkazo. Ny karazana hybrid dia manana karazany, loko ary endrika.
Zephyranthes grandiflora - mamorona tongolobe hatramin'ny 15 cm ny haavony, mamony amin'ny fahavaratra amin'ny voninkazo izay mitovitovy amin'ny crocuses.
Veltheimy Kapse - lehibe toy ny trano famolavolana. Ny tongolobe dia hatramin'ny 30 santimetatra avo, izay misy voninkazo vita amin'ny voninkazo 60 eo ho eo, dia hanamboatra trano.
Rehefa manangona zavamaniry mipetaka ao an-trano dia tena zava-dehibe ny mifantoka amin'ny fisafidianana ny vilany. Ny fitahirizana tanimanga simenitra kely, izay misy rindrina matevina sy matevina, no mifanaraka tsara indrindra. Ao ambadiky ny vilany dia tsy tokony hafafy. Ny haben'ilay vilany dia voafidy araka ny habeny.
Zava-dehibe izany! Ny vilany dia nofinidy araka ny tokony ho izy raha ny halaviran-dalan'ny mandany ka hatramin'ny biriky dia 1.5 cm ny malalaka.
Any amin'ny faran'ny fitoeram-pandehanana dia tokony ho lavaka ny fivoahana. Ny diametr'ilay vilany dia tokony ho mitovy amin'ny haavony.
Jereo tsara ny voninkazo tsy mitsaha-mitombo.
Ny fandriana toy izany dia manana endri-javatra maro tsy maintsy dinihina rehefa manomana azy:
Mba hahafahan'ny voninkazo hivelatra sy hifanoloana dia tokony ho be ny halavany.
Misy fandriana iray mamiratra be mijery rehefa misy loko lehibe eo aminy. Ny voninkazo izay mitombo irery dia tsy manome ny singa iray manontolo.
Ny zavamaniry maniry mandritra ny fe-potoana iray dia mety ho vondrona.
Azonao atao ny mampifandray ireo zavamaniry izay manana fepetra mitovy amin'izany (ho an'ny tany, ny rano, ny jiro, ny jono)
Rehefa maniry eo am-pandriana fotsy, tandremo tsara ny habetsahan'ny zavamaniry sy ny tahan'ny fitomboana.
Ny fifangaroana voninkazo dia tsara kokoa raha dinihinao ny haben'ny loko. Azonao ampiasaina ny loko fanampiny sy mifanohitra.
Ny fandrihana ny voninkazo dia manomboka amin'ny "kalandrialin'ny voninkazo", toy ny voninkazo sasany manomboka amin'ny fiandohan'ny lohataona, ny hafa dia maniry amin'ny fahavaratra ary farany amin'ny fararano. Avy eo, ilainao ny manamboatra drafitra ny fandriana amin'ny voninkazo, raha jerena ny fomba fijerin'ny zaridaina voninkazo amin'ny fotoam-pamokarana voninkazo.
Tokony hoeritreretina fa ny fandriana dia manana fomba fijery samihafa, ary manamboatra ny zavamaniry amin'ny fomba tsy hifampikasohana.
Ao amin'ny voninkazo dia mila mikarakara ireo voninkazo ianao, noho izany dia mila manome lalana kely ianao. Azo atao amin'ny molotra amin'ny fitaovana samihafa. Ny lalana toy izany dia ahafahanao manatratra zavamaniry iray mba hahafahana manapaka, mamehy, manondraha azy.
Ny fikaon-java-maniry ho an'ny fambolena voninkazo dia asa sarotra noho ny karazana karazany sy ny karazana voninkazo toy izany. Misaotra an'ity lahatsoratra ity momba ny voninkazo eny an-jaridaina, izay misy lisitra miaraka amin'ny anarana, afaka misaina amin'ny antsipiriany bebe kokoa ianao fa ny voninkazo ao amin'ny fianakaviana dia mety hitovy aminao indrindra.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Zavamaniry sy voninkazo eny an-tampon-trano